पुष २८ गते शुक्रबारबाट तीन दिने सामान्य तथा आधारभूत शेयर तालिम हुँदै !
ARCHIVE » पुष २८ गते शुक्रबारबाट तीन दिने सामान्य तथा आधारभूत शेयर तालिम हुँदै !
काठमाडौँ- ज्ञानेश्वरमा पुष २८ गते शुक्रबारबाट तीन दिने सामान्य तथा आधारभूत शेयर तालिम सन्चालन हुने भएको छ । तालिम नवप्रवेशीलाई लक्षित गरी तयार गरिएको आयोजकको भनाइ छ । तालिममा शेयर बजारको परिचय , शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने कुराहरु , कम्पनीको वित्तिय अवस्थाको सामान्य जानकारी , शेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोगको बारेमा जानकारी दिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
'यो प्रकृतिको तालिम दिदै आएको हाम्रो यो सातौ व्याच हो, आजसम्म सबैको राम्रो माया र समर्थन पाएका छौं' नेशनल मर्चेन्टका सन्तोष राज बजगाईले अर्थ सरोकारसँग भने, 'तलिम बेलुका ४ बजे देखी ६ बजे सम्म सन्चालन हुनेछ । तालिम शुल्क १ हजार निर्धारण गरिएको छ भने त्यसमा महिला तथा विधार्थीलाई २० प्रतिशत छुटको व्यावस्था छ ।' बजगाईंका अनुसार तालिममा सहभागी हुन ९८४९०५६१६१ मा सिधै संपर्क गर्न सकिने , अथवा तलको लिंकमा गएर नाम टिपाउन सकिने छ ।
अन्य विवरण तलको तस्विरमा